Ny haino aman-jery dokam-barotra dia nifanakalo tamin'ny gazety radio sy boky nentim-paharazana ka hatrany amin'ny tambajotram-pahitalavitra ankehitriny sy ny fampisehoana LED matihanina anaty / ivelany. Manohy mandalina ny fanavaozana i Everyinled, nanao ny toerany manokana amin'ny sehatry ny fampirantiana. Manohy manitatra tsena any ampitan-dranomasina izahay, ary mamorona fifandraisana amina sakaiza maharitra amin'ireo mpanjifan'ny firenena maro samihafa manerantany.
Ny tetikasanay farany dia ho an'ny mpanjifa taloha any Sipra, ity tetik'asa ity dia fampisehoana 20.736mx2.304m P3 Curved LED, Ny famaritana toy izao manaraka izao: jiro mainty nasionalstar SMD2121, 5124IC, famatsian-jiro meanwell, mpanodina horonantsary LVP7000 mahery.
Rehefa nametraka azy ireo izy ireo dia nahita fa nisy ny olana nipoitra, sarotra ho azy ireo ny mamaha, nanapa-kevitra avy hatrany izahay handefa ny injenieranay hanampy, amin'ny ezaka ataonay, tonga lafatra ny zava-drehetra. orinasa, afa-po amin'ny serivisinay sy ny kalitaon'ny vokatra izahay, nanohy niara-niasa nandritra ny taona maro izahay. Manantena izahay fa afaka miara-miasa bebe kokoa amin'ny tetikasa ato ho ato ary hanana fampandrosoana bebe kokoa any Sipra sy faritra afovoany.
Everyinled dia teo an-dàlana hatrany amin'izao tontolo izao mba hitondra vahaolana tsara indrindra, Aiza ianao? ny mpiara-miasa malalantsika!